Kuyababa kwaboHlanga embonini kashukela - Bayede News
Home » Kuyababa kwaboHlanga embonini kashukela
Usizi lwaboHlanga embonini kashukela luyinto endala futhi engakapheli. Ngesikhathi sobandlululo aboHlanga babebambe indima yokusebenzela abatshali bomoba abamhlophe abazimele noma izinkampani ezigaya umoba zakhe ushukela. Yize babekhona ababetshale umoba ezindaweni zaMakhosi noma ezimishini, babengenawo amalungelo afana nawabadeshi ababesembonini efanayo. Labo ababesebenza embonini kashukela njengabagawuli, abatshalayo, abashayeli bogandaganda njalonjalo babengenamalungelo okusebenza endaweni ephephile, ukuhola ngendlela eyenelisayo nokuphathwa nje ngendlela enobuntu. Kwakuyinto ejwayelekile nje ukuthi umdeshi ophethe noma futhi ongaphethe adedele isibhaxu kwaboHlanga abonile nabangonanga lutho. Kuze kube namhlanje kunamagama avela ngenxa yokuziphatha kwabadeshi abathile. Lapha singabalula amagama afana noSbhakela, uMakhabitashi nabanye.
AboHlanga ababenentshisekelo ngemboni kashukela bayithola iphelela emoyeni njengezithukuthuku zengcanga ngenxa yokuthi umkhiqizo wabo wawungathathwa njengobaluleke njengowozakwabo abamhlophe. Ezindaweni lapho umshini kashukela unabalimi abaningi abawuphakelayo bekuyinto ejwayelekile nje ukuthi amaloli athwele umoba waboHlanga eqelwe emgqeni. Lokhu kusenzeka namanje ezindaweni ezithile noma sekufihlwa ngezindlela ezithile.
Ayiphathwa eyokuthi aboHlanga babambe iqhaza ekugayweni komoba. Insizwa yoHlanga eke yazama nguDkt uPatrick Sokhela owaziwa kakhulu ngeqhaza alibambe kwezikanobhutshuzwayo njengoba athenga iqembu AmaZulu FC. USokhela wake wathenga umshini kashukela waseDenela (Darnall) kodwa wabuye wawudayisela abakwaTongaat Hullett.
Izinhlaka eziphethe imboni kashukela kusukela ekutshalweni kwawo, ukuvunwa, ukuhanjiswa emshinini ukugaywa, ukuthuthwa kukashukela nokwakhiwa kweminye imikhiqizo enjengamakhemikhali, uketshezi okwenziwa ngalo utshwala nokunye okuningi kuqhoqhobalwe abadeshi amakhulukhulu eminyaka.
Nangasemva konyaka we-1994 owaduma ngokuletha inkululeko, isikhathi eside beyingekho inkululeko kwaboHlanga, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngenkululeko yezomnotho. Yize beye banda aboHlanga abatshala umoba nabangosonkontileka kule mboni kodwa usosesheni okunguwo ophethe izindaba zikashukela ezweni jikelele ubunamalungu ayizinhlangano ezimbili kuphela. Lezo yiSouth Africa Canegrowers Association kanye neSouth African Sugar Millers Association. Zombili lezi zinhlangano besekuphele amakhulukhulu eminyaka zimhlophe wu. Lokho bekusho ukuthi abazimele kuSouth African Sugar Association bekungabadeshi. Uma kuthukele kwaba nowoHlanga kwakusuke kwenzelwa nje ukuhlobisa ukuze kube sengathi ubandlululo alukho.
Lokhu kwadala ukuthi yize aboHlanga base bebaningi embonini njengoba uHulumeni wedemokhrasi wayenza izinguquko ngezinhlelo zokubolekisa ngamapulazi kanye nokuthengisela aboHlanga amapulazi omoba, izwi laboHlanga lalifa namthanyana. Embonini kashukela kunemali yentela ekhishwa yibo bonke abalimi ngomyalelo womthetho iSouth African Sugar Act. Le mali uma isiyonke ibalelwa ezigidigidini zamarandi. Isetshenziswa ukuxhasa izinhlangano ezingamalungu kasosesheni iSASA iphinde ixhase iSASA uqobo lwayo neSouth African Sugar Research Institute (SASRI). Ziningi izinqumo ezibalulekile ezithathwa yiSASA eziba nomthelela kuwo wonke umuntu okhona embonini kashukela. Ukungameleleki kwaboHlanga kwabasalisela emuva kakhulu.
Lokhu kuhlupheka kwaboHlanga yize basebengamalungu ezinhlangano ezikhona embonini kwaholela ekutheni kube nofuduko. Ababenganelisekile bakhetha ukusungula inhlangano yaboHlanga nabomdabu baseNdiya namaKhaladi ukuze ilwele izidingo zalezi zinhlanga ezintathu. Kuphele isikhathi esijana nokho kunokuzabalazela ukuthi inhlangano entsha, iSouth African Farmers Development Association (SAFDA), ithathwe njengesemthethweni.
Labo abanamakhulukhulu eminyaka bedla ngabodwana noma begiya bodwa embonini kashukela benza imizamo eminingi yokuvimba ukwamukelwa kweSAFDA ngokusemthethweni. Umalamulela kwaba ngukuthi eminyakeni embalwa eyedule ikomidi elibhekene nezomnotho ePhalamende likazwelonke likhombe ngenjumbane iSouth African Sugar Association kanye nezinhlangano ezingamalunga ayo.
Leli komidi layalela iSASA ukuthi yamukele iSAFDA ngokusemthethweni kungenjalo izoyalela iDepartment of Trade and Industry ukuthi ibuyekeze uMthetho omdala iSouth African Sugar Act. Ngokuvunywa kweSAFDA ngokusemthethweni kwanyuka ukumeleleka kwaboHlanga kule mboni njengoba ngegazethi lenhlangano yase iba lilungu leSASA isilingana neCanegrowers Association kanye neSouth African Sugar Millers Association.
Ukuvunywa kweSAFDA ngokusemthethweni kwaba ngokwesikhashana njengoba kwasekuphuthuma. Izindaba ezinhle ngukuthi kusanda kuphuma igazethi egixabeza iSAFDA ngokuvunywa eminye iminyaka emihlanu.
Njengoba ukuhweba ngomoba kudinga izindodla zemali aboHlanga sebeyakwazi ukuthi bathole uxhaso hhayi oluvela kuHulumeni kuphela olusuke lucelwe yiSASA kepha nabo sebekwazi nokuthi bazakhele ezabo izinhlelo baxoxisane nezimboni ezihlobene nemboni kashukela. Lapha sibala izinkampani ezikhiqiza umanyolo, amakhemikhali okulwa nokhula njalonjalo.
Unyawo lwaboHlanga kule mboni alukaphumuli njengoba isenkulu indima okufanele beyikhathulile ukuze babone izithelo zezomnotho. Iningi labalimi bomoba abanazo izithuthi zomoba njengogandaganda namaloli kanti enye yezinkinga ezinkulu ngukuthi njengoba isizini yomoba iyizinyanga eziyisi -9, uma kuvulwa ngesizini elandelayo kunezindleko ezimba eqolo abangena kuzo. ISAFDA inalo uhlelo lokubolekisa ngemali yokuvula isizini nokuqhubeka nayo abalimi abakhokha inzalo ephansi uma sebeyibuyisa. Kodwa kuyoba mnandi kakhulu lapho aboHlanga sebengasazitholi beboleka njalo uma kufanele baqale isizini entsha.
Zakhele Nyuswa Jul 6, 2020